Faa’iidooyinka laga helo Mooska – AwKutub News
Faa’iidooyinka laga helo Mooska
Mooska waxa uu leeyahay faa’idooyin aad u tiro badan, lamana tirin karo faa’idooyinka uu mooska leeyahay, halkanna laguma soo koobi karo, waxaa lagu tiriyaa mooska inuu yahay fawaakihda hodan ku ah fatimiinada kuwaas oo dadka ay ka helaan fatamiinada A, B iyo D.
Sidoo kale mooska ayaa hodan ku ah qaar ka mida macdanka muhiimka u ah caafimaadka jirka bani’aadanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin sida Potassiumka, carbohydrate sidoo kale waxaa ku jira qaar ka mida aashitooyin jirka faa’idada u leh.
Hadaba warbixintaan waxaa idin kugu soo gudbinaynaa faa’idoonka uu mooska leeyahay kuwaas oo ah kuwo wax ku ool ah waxaana ka mida.
1- Yareynta Miisaanka: Mooska waxa uu gacan weyn ka geystaa inuu yaraado miisanka qofka, waxaana ku jira maado lagu magacaabo Karboohaydarood oo la dagaalanta baruurata iyo dufanka, sidoo kale waxay ka qeyb qaadataa inuu miisanka qofka uu hoos u dhaco.
2- Awood Siin: Mooska waxa uu leeyahay awood siin dheeri ah oo uu jirka siiyo, waxaana inta badan lagu booriyaa dadka sameeya sportiga inay cunaan Mooska ka hor inta aysan sameyn Sportiga, kaasi oo jirka u siyaadinaayo awood dheeri ah oo u surto galinaysa inuu Sportiga si fiican un watto muddo dheer.
3- Waxa uu daawo U yahay Habdhsika Dheefshiidka iyo calool fadhiga: waxaa ku jira Mooska nooc ka mida Buriitiinka geedaha, waxayna qeyb ka qaataan inuu si wanaagsan u shaqeeyo habdhiska dheef shiidka iyo inuu jilciyo caloosha isagoo wax daawo ah aan loo kaalmeysanaynin, waxa uu la dagaalamaa mooska inay caloosha fariisato.
4- Waxa uu daawo u yahay Aashitada: waxa uu ka shaqeeyaa mooska inuu daaweeyo oo uu yareeyo Aashitada caloosha si deg deg ah.
5- Waxa uu daawo u yahay dadka caba Sigaarka: waxa uu dawo caafimaad u yahay dadka cabo sigaarka, kaasi oo kasaara wasaqda sigaarka, waxa uuna yareeyaa saameynta uu sigaarka uu ku leeyahay jirka, waxaana ku jira koox fiitamiino ah oo ka shaqeysa inay yareeyaan saameynta xun uu ku yeelanaayo sigaarka jirka.
6- Waxa uu caafimaad u yahay wadnaha: Potassium waa cunsur asaasi ah waxa uuna ka shaqeeyaa inuu ilaaliyaa in wadnuhu si nabadgalyo ah uu u shaqeeyo, waxa uuna habeeyaa dhiig karka, cusurkaan cuntooyinka laga helo waxaa ka mida Mooska, cunista mooska waxay yareysaa cudurada ku dhaco wadnaha sida wadno istaagga.
7- Wuxuu ilaaliyaa caafimaadka Kaliyaha: Mooska oo la cuno todobaadkii marar dhowr ah waxa uu yareeyaa cudurada ku dhaco kaliyaha 50% tan, maxaa yeelay waxaa ku jira cusurka Potassium, kaaso oo ka shaqeeya inay kiliyaha si caafimaad leh ku shaqeeyaan.
8- Waxa uu la dagaalamaa Gabowga: Mooska waxaa ku jira Fatamiino aad u sareeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin Fatamiin A, iyo C sidoo kale waxaa ku jira Aashitooyin diidaya inay timaado Gabow deg deg ah.
Tags: Caafimaadka Mooska
Previous Entry Hoggaamiyaha Ginbot 7 oo dib ugu soo laabtay Itoobiya
Next Entry Tooriyeyn ka dhacday Paris